Tamin'ny andron'ny Baiboly, dia nahazatra ny mpanjaka ny nanao fanasana lehibe tao amin'ny lapany. Notanterahiny izany mba hanehoana ny hareny sy ny heriny rehetra. Tsy fantatsika avokoa ny tsipiriany rehetra momba io fanasan'i Belsazara io, saingy fantatsika kosa fa nitranga tamin'ny fotoana niomanan'ny tafika medo-persianina mba hanafika an'i Babilôna izany. Tsy nisy natahorana anefa, raha amin'ny fijerin'ny olombelona, satria voahodidin'ny manda mafy tokoa i Babilôna. Nisy tahirin-tsakafo betsaka koa tao amin'ny tanàna, sakafo ampy hamahanana ny olona rehetra tao nandritra ny taona maro. Nisy rano betsaka koa satria nikoriana namakivaky teo afovoan'ny tanana ny ony Eofrata. Koa tsy hitan'ny mpanjaka Belsazara ny olana amin'ny fanaovana fanasana. Tena nanodidina ny tanàna tokoa ny fahavalo, saingy tsy natahotra ny amin'izany izy. Nanome baiko ny hisian'ny fankalazana lehibe izy. Tsy ela anefa dia nivadika ho lanonana fibobohana divay izany. Mampalahelo fa naneho ny avonavona tao am-pony ny mpanjaka. Asehon'io tantara io koa anefa fa mahery noho ny avonavon'ny olombelona Andriamanitra. Koa tamin'ny alalan'i Daniela no nitenenan'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka fa nomeny tombontsoa maro hianarana ny marina izy, saingy "Andriamanitra Izay mitana ny ainao sady Tompon'ny alehanao rehetra dia tsy mba nankalazainao" - Dan. 5:23. "Fianarana ho antsika ankehitriny ny tantaram-pirenena. Nanokana anjara toerana ho an'ny firenena tsirairay, ho an'ny olona tsirairay eo amin'ny plan midadasika nataony Andriamanitra. Ary amin'izao androntsika izao dia hozahan-toetra ny olona rehetra sy ny firenena rehetra, ka hafatra amin'ny famarana eo an-tanan'llay tsy mety ho voafitaka. Hametra izay ho anjarany amin'ny alalan'ny safidy ataon'ny tenany ny olona sy ny firenena rehetra, ary hitantana ny zava-drehetra Andriamanitra ho fanatanterahana ny fikasany"- MM, t. 438.
1. Amin'ny fomba ahoana no animbazimban'ny fiarahamonina sy ny kolontsaina manodidina antsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra? Inona no tokony hataon'ny fiangonana sy ny olona tsirairay manoloana ireo fanimbazimbana ireo?
2. Inona no ampianarin'ny tantaran'i Belsazara antsika momba ny famonjena? Nahoana ny famonjena no tsy dia mahakasika loatra izay fantatsika, fa mahakasika kokoa ny fihetsitsika manoloana ny zavatra fantatsika? (Vakio ny Dan. 5:22.)
3. Inona no foto-kevitra ara-panahy ampianarin'ny Dan. 5:23 antsika? Nahoana io andininy io no mampitandrina antsika tsy hihaika an'Andriamanitra? Inona koa no ampianarin'io andininy io momba an'Andriamanitra, amin'ny maha-Mpamorona antsika sy Mpihazona ny aintsika Azy?
4. Tsy takatr'i Belsazara ny hevitr'ireo teny voasoratra teo amin'ny rindrina, saingy natahotra ihany izy (Dan. 5:6). Inona no ambaran'izany amintsika momba ny hevItry ny hoe miaina miaraka amin'ny fo mahatsiaro meloka?